Mahajanga: Vehivavy maty voatototry ny tany
mardi, 04 décembre 2018 20:17
Vehivavy iray 38 taona no nianjeran'ny trano izay nirodanan'ny rindrim-bato ka nampihotsaka ny tany vao nototofana teny Ampisikina, Fokontany Mangarivotra Mahajanga.
Nikija ny oram-baratra alina tontolon'ny alahady hatramin'ny maraina teto Mahajanga tampon-tanàna, tsy manaraka ny fenitry ny fanorenana anefa ity rindrim-bato ity, ary efa nampitaraina ny mponina teo amin'ny manodidina sy ny sefo Fokontany, saingy tsy nisy mpihaino.
Ity vehivavy ity sy ny reniny no tao an-trano, saingy natory tamin'ny efitra samihafa. Efa nahatsiaro ilay reniny tamin'ny efatra ora maraina nitrangan'ny fihotsahana ka tafavoaka, fa ity farany izay mbola tao anaty torimaso lalina no tavela tao.
Saika simba avokoa ny trano teo amin'ny manodidina ary mbola tandindomin-doza, satria mbola ny ampahan'ny rarivato ity nihotsaka ity.
Tsy maintsy nesorina tamin'ny trano avokoa ny mponina manakaiky ity toerana ity ary mbola mandinika ny fomba handrodanana tanteraka ilay rindrim-bato ny teknisiana avy amin'ny Kaominina nidina teny an-toerana, niaraka tamin'ny Ben'ny Tanàna Andriantomanga Mokthar Salim.
Ora roa tao aorian'ny fihotsahana vao voasikotra tao anaty tany ny nofo mangatsiakan'ilay vehivavy. Vaky tanteraka ny lohany ary nipotsaka ny atidohany.